Daawitii keessatti of ilaaltan! – Kichuu
Daawitii keessatti of ilaaltan!
Daawitii keessatti of ilaaltan
Mormi maaliif uumame jennaan ittiin galagalanii ilaaluuf jedhama. Mormi keessan galagalee yoo ilaaluu dadhabe daawitii ittiin keessatti of ilaaltantu kunooti.
Obbo Araarsoo,Qajeelaa, Ibsaa; Jijjiiramni butamee isin jijjiirama jettanii itti amantan kana kan fide dhiiga,lafee fi lubbuu kumaatama ilmaan Oromooti. Uummata Oromoo adda durummaan kan qindeesse immoo kan addunyaanuu ragaa bahuuf Qeerroo Bilisummaa Oromooti. Jalqabumaa isin Qeerroo Bilisummaa Oromoof beekamtii dhorkachuun as baatan. Kan Qeerroon Bilisummaa Oromoo isinitti himuun “kara deemaa” jettan. Qeerroon Bilisummaa Oromoo daandii irbuu goototaa irra tarkaanfataa tarkaanfachiisa malee aangoo keessan isinii tiksuuf hin ijaaramne. Kana duwwaa miti.
Hooggantootni ABO kan akka Jaal Abdii Raggaasaa, Gammachuu Ayyaanaa, Amaan Filee,Lammii Beenyaa, Kaayyoo Fufaa, Yaasoo Kabbabaa, Daawit Abdataa fi hooggantootni KFO, kan akka Jawar Mohammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Hamzaa Booranaafaa kumaatama waliin hidhamanii dararamaa jiranitti guyyaa tokko illee sagalee taatanii hin beektan. Fuula miidiyaa hawaasaa keessan irrattis ibsa maqaa Koree seeraaf to’annoo dhaan baasuun aangoo keessaniif watwaatuu, rakkoon ABO keessoodha jechuun alagaaf gabaasuun alatti guyyaa tokko illee dhimmi hidhamaa siyaasaa fi duulli meeshaa gurguddaan uummata Oromoo irratti labsame isin hin dhibne.
Mee egaa,isin warra ABOf dhiphatu taanaan ABOn Oromoo, miseensa isaa fi Qeerroon alaa hiikkaan maali
Rakkoo guddaa alaan ABO irratti labsamee hidhaa fi ajjeechaan uummata rakkisu osoo hin argiin rakkoo keessoo jechuun kaayyoon isaa ifa. ABO PPn akka barbaadetti ulee qabatu tolchuu dha. Qeerroon Bilisummaa Oromoo kana dide. Toles hin jedhu. Kanaaf, maqaa Kora Sabaa irra deddeebbiin olola rakasaa PPtti hirkachuun deemtan irraa dhaabbachuun waan ABO fi Qeerroo Bilisummaa Oromoo dhaggeeffadhaa jechaa, namootni,uummatni Oromoo walii galaa dhaabakee, ABO dhiigaan tiksitee asiin geesse dhiigaan tikfachuu duruu itti beekta jenna
Dubartii jechaaf gochi ishee Habashaa ta’e kana,ilmaan girrisaa sabboontudha nun jechaa jirti!